Nwere ike ibudata akwụkwọ ahụaja ọhụrụ 12 site na ebe nrụọrụ weebụ Apple | Esi m mac
Nwere ike ibudata akwụkwọ ahụaja ọhụrụ 12 site na weebụsaịtị Apple
Na oge nke Earthbọchị Earthwa nke emere na Fraịdee gara aga Eprel 22, Apple emewo ka dị ka ndị ọrụ ya ma ọ bụ onye ọ bụla nwere ike ịhụ na ọ na-akpali mmasị, nchịkọta nke 12 na akwụkwọ ahụ aja na agwa gburugburu. N'ụzọ dị otú a, ha chọrọ ime ememme Earthbọchị bywa site n'igosi na ha bụ ụlọ ọrụ na-etinye aka na nsogbu gburugburu ebe obibi.
Apple akpọwo mkpọsa a "Nkuzi si Daybọchị Earthwa" eduzi tumadi nye umu akwukwo na umu akwukwo nke ulo akwukwo mmuta ma si otua kuzi okwu gbasara gburugburu di iche-iche nke gbasara gburugburu nchekwa, usoro ndu na ihe banyere gburugburu ebe obibi.
Dị ka ọtụtụ microsites ndị ọzọ dị na ebe nrụọrụ weebụ Apple, ibe ndị a jupụtara na foto mara mma nke ọma na oke mkpebi, oge a nwere isiokwu gbasara ụwa, ebe anyị ga-ahụ ịnyịnya ọhịa, ụsọ mmiri, ọhịa kelp ma ọ bụ ọbụna osisi nke osisi na otters.
Agbanyeghị ma e wezụga isiokwu amaraworị banyere Eluigwe na Ala na nwere ndabara akwụkwọ ahụaja ruo mgbe OS X version 10.10 El Capitan, otu n'ime Apple kasị amasị gburugburu ka mgbe ọdịdị, ebe ọ na-ama nyere anyị mara mma na akwụkwọ ahụ aja nke Yosemite ogige, ma ọ bụ ndị kasị kpochapụwo ndị si ihe oyiyi nke Africa.
N'aka nke ọzọ, ekwesiri ighota na akwụkwọ ahụaja ndị a kapịrị ọnụ dị na mkpebi dị elu, ọ bụ ezie na ụfọdụ anaghị asọpụrụ akụkụ ahụ: oke nke ụfọdụ ngebichi, mana ịdị nkọ na ogo ihe oyiyi ga-ezu na kọmputa ọ bụla, ọbụlagodi na ụdị Retina. Mgbe ahụ, m ga-ahapụrụ gị njikọta njikọ nke nwere faịlụ .zip site na ebe ị nwere ike ibudata ha niile na lezienụ onwe unu anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Nwere ike ibudata akwụkwọ ahụaja ọhụrụ 12 site na weebụsaịtị Apple
McHeist na-enye nkwado nke egwuregwu 9 Indie maka $ 20
Etu esi edezi diski exFAT ka ọ rụọ ọrụ na Windows na OS X